Fashil Ku Yimid Howlgalkii Ciidammada Itoobiya
Miyeysan ahayn damiir xumo dhibaatada gaartay dadkeenna inaan dusha kala soco uun. Maanta kuweena sida qabow u akhrisnaya maqaalkan ooy dhici karto una badan tahay inaad haysato xoriyada aad ku akhrisato maqaalkan, nalal aad ku aragto, biyo aad cabto, cuno aad cunto, sharaab nooc aad doonto aad cabto iyo kaftan haasaawe fartana aad jeelkaa ugu fiiqdo waxa dhacay ood indhaha kaga birigbirigsiiso ayna kuula ekaado waxaan dhici Karin, marmarsiino darteed kolba gidaar u xagato. Waxaan ku lee yahay waa dhab waa xasuuq waa baro kaicin waa bah dil waa naxariis daro, Waxaan kaloo ku lee yahay waa lama qaataan waxa ka dhacay dhulkeenna ku hoos jira Itoobiyaanka.
Hal eray baan ku lee yahay WAA GUMAYSI;
Dadkan degan gobolkan waxaad ku garan inuu gumaysigu dillooday waxay hadba ku sal kacaan war suuqeedka dhiilo, colaad, farxad. Sheekadoodana waxaa xiiso u yeela hadba inta ay maqalaan. U fiirso ma dhici karto in qofku uu isagu go�aan lee yahay, saas darteedna fakir ma jiro ee wuxuu ku xiran yahay qof kale wuxuu yiraadho inay tahay tallada iyo qo�aanka la qaadanayo, ayadoon la dhirindhirin hadalka iyo dilka meeshuu ka soo baxay. Waxaan idhi xudunta dhibaatada waa gumaysi; hadaba ma is weydiinaa waa maxay GUMAYSI maanta?
Jawaabta addaan kuu daayey laakin hadaan si fudud u bidhaamiyo waa xoogga kaa hor istaaga inaad fushato danhaaga gaarka ah iyo mid guud, kol kastana ku mashquulsan inuu xoog iyo xeeladba kugu muquuniyo.
Dabcan, Gimaysiga Itoobiya waa inuu ciyaaraa xeeladaas saas darteed ayuu dowladiisa ugu yeedhaa FEDERAL STATE oo dastuuri ah. Taa macneheedu waxa weeye wadanku wuxuu lee yahay dowlad, dowlado kale ayaa ku sii hoos jira, ooy dowlada walbaana u madax banana tahay daneheeda gaarka, waxaana kuligood ka wada dhexeeysa danta guud. Itoobiya intaa kuma ekaan ee waxay hoosta ka xariiqday oo dastuurkeeda ku jira kuna qoran in dowladii doonta ay codsan karto haddii baarlamankeedu isku raaco in dadkeeda afti laga qaado si ay gooni ugu istaagto (Xornimo).
Ayadoo Dastuurka laga ambo qaadayo ayaa baarlamaankii Soomaaliyeed ee ku yimid si demuqraadiga uu ku taliyey in shacabka Soomaaliyeed loo ogolaado in Afti laga qaado.
Hadalkan Dowldadii kuma qancin kumana qanci karto dabcan sida ayada ay la tahay in la soo hadal qaadaa maysan rabin. Deedna waxay bilowday iska hor keenid aydoo markii hore ugu golgol xaartay in qabiil walbaa uu urur samaysto, si fowdada meel sare u gaarto oo cid cid aamintaaba aysan dhicin. Wey guulaysatay, ma ah kaliya inay falsafadaan ku jabiso shacabka Soomaaliyeed ee degan Itobiya ee waxay tanina xal fiican u noqotay in lagu burburiyo midnimadadii Soomaalidii xorta ahayd.
Dad badan ayaa is lahaa markii Itoobiya ay ka dhabaysay wixii ku qoraan dastuurkeed oo ay Eratariya siiya xoriyadeed inay adkaan doonto in gobolkan Soomaliyeed la siiyo xoriyadiisa. Iyakoo sal uga dhigaya in Itoobiya ay noqotay dhul ka xiran Bad.
Inuu Xeebta Liido ka soo jeesado.
Mar haddii uu lumiyey ama ay ka faro baxday Eritariya welwelka wuxuu noqday xaggee dekad laga helaa reer Soomali Land ayaa qoorta hoos dhigtay, deedna waxaa iyana ku dabo safatay Puntland, waxaa hadyada isu bixisay Muqdisho ugu danbeeyntii waxaa hadda Itoobiya Hoteeladeeda fadhiya Cabdirahmaan J. Bare iyo Ayaanle Maxamed Siyaad Barre oo leh anagaa idin kaga fiicnaan doona kuwa aan ka saarnay magaalada na aamin oo na xujeeya.
Xoog ayaan idinku muquurin.
Tashi badan ka dib, odayaal deeqaameedka killilka Shanaad (Ogaadeenya/ Soomligalbeed) waxay cod gaaban iyo mid dheer ku yiraahdeen walaal ku dhaqan dastuurka oo yeel fariinta Baarlamaanka uu ku taliyey. Laakin waxaa la yir Nin ay hali u muuqato ayaan tu kale arag, Zinaawi wuxuu ku taliyey dagaal.
Dagaalo badan oo ku doonay inuu ku jabiyo ONLF ayuu qaaday wey suurto gali weyday. Wuxuu bilaabay wado hadal iyo duqooshin inuu dibada u soo diro. Guul daro.
Mar qudha ayuu Zinaawi liqay Soomaaliya. Ka dib, waxaa dhacay dagaalkii Cobolla iyo Sandhoore ee degmada Dhagaxbuur, kaasoo ONLF ay weerar ku qaaday shiinihii doonayey inuu soo bixiyo shidaalka dhulka ku jira halkaas waxaa ku naf waayey dad badan oo u badan Soomaali iyo shiinanba.
Dagaalkii Cobolla iyo Sandhoore ka dib muxuu sameeyey Zinaawi
Mar kale inuu sifayn doono ONLF.
Genraalada Ciidanku shirar badan ayey shacabka la galeen waxayna u sheegeen in shacabku noqon doono mid dowlada raac iyo mid nabada diid ah. Dagaalna ay la gali doonaan. Ciidan xoog badan ayey ku dul xireen magaalooyinkii Dahagax buur, Qabdir darha, Wardheer, Jigjiga iyo meelo kaleba. Weerar cir iyo dhul isugu jira ayey qaadeen.
Dhibaatada shacabka gaartay.
Howlgalkoodii wuxuu noqday in shacabka lagu sameeyo;
In biyihii laga xiro.
In korantadii laga xiro.
In telephonkii laga xiro.
In baayacmushtarkii laga xiro.
In isu socodkii la xanibo.
In ciiddan lagu xeendaabiyo magaalooyinka.
In reer baadiyihiii lagu khasbo inay soo galaan magaalooyinka .
In askari uu ku toogan karo il ku arag.
In ciidanku uu gubo reeraha lagu tuhunsan inay taageeraan Jabhada ONLF.
Howlgalka Tigraayga uu ku shaqeeyo.
Qaybi oo xukun.
Qaybi oo isku dil.
Qayba xukunka u dhiib.
Mudo dheer ayey u shaqaysnaysay falsafadaan, ilaa hadda dowladaha wax gumaysta wey isticmaalaan. Eeg waxyaabaha ka dhacay Falastiin, Afgaanistaan, Iraaq iyo meelo badan oo lagu xad gudbo. Tii ugu danbaysay ee Itoobiyaanku u isticmaalaay Soomaaliya qaybi qaybi, qayb kalana ku qabso qaybtii harsanayd. Qayb kastaan meel u dhiib. Qaybna qaybta kale ayeyna u gudbin.
Fillan waaggii ka soo baxay.
>>> Guul Guul Guul
Dhibaataddii ayaa cirka isku shareertay, isku socodkii markii uu yaraaday qofkii la arkaa isagoo socod toogasho lagu xukumay, raashin soo gala magaalooyinkii la waayey oo macayshadii la gooyn kari waayey. Weeraro cir iyo dhul lagu qaaday reerihii oo dilka shacabka loo xaleeleeyey askari Tigraayga. Ardaydii macalimiintii, shaqaalhii lagu khasbay inay qoriga qaataan. Ganacsatadii la wada xirxir iyadoo loogu aaneenayo Qabiilkood.
Intaas oo ciriir ka dib,
Shacabku waxay muujiyeen markii u horaysay inay fahmeen gumaysiga.
Shacabku waxay goosteen inay qaybsadaan dhibaatada oo gurmad isu geeyaan.
Shacabku waxay muujiyeen in xaalad kasta oo xun lagaga bixi karo midnimo iyo adkaysi.
Shacabku waxay ku dhaqaaqeen in ay magaalooyinka faaruqiyaa.
Shacabku oo ay hoggaminayaan siyaasiyiin iyo salaadiin waxay fool-ka-fool uga hor yimaadeen cadowga, taasoo dhaxalsiisay dil iyo xiriga.
Shacabka ku nool dibadaha waxay hiil iyo hoob la garab istaageen dadkooda dhibaataysan.
Shacabka ku nool dibadaha waxay ku muujiyeen khusayntooda baanaanbaxyo iyo kullamo laga hadlayo culayska iyo arxan darada ay gaysteen ciidamada.
Ballantii Zinaawi way fashilantay waxaa khasab noqotay in la furo quutul yoomigii, biyihii, telefoonad, korontadii iyo isu socodkii. Taasna waxay hoosta ka xariiqday guul ay gaartay Jabhada ONLF iyo shacabka Soomaaliyeed.
Caalamku wuxuu garowsaday in tacdi xuquuqul insaanika ka dhan ah ay gaysteen ciidamada Itoobiyaanka ee ka dagaal galay Ogaadeenya.
Waxaa qoray Saaxiibkaa walaalkaa;
Afeef: QOraalkan aragtidiisa waxaa leh qoraaga ku saxiixan